एकलकेयरमा २ cheap सस्ता सस्तोहरू - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि बनाम मित्र कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी प्रेस मनोरञ्जन खेलहरु घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी
मुख्य >> कम्पनी >> एकलकेयरमा 25 सस्तो उपचार
एकलकेयरमा 25 सस्तो उपचार
संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रिस्क्रिप्शन महँगो छ। तिनीहरू सबै स्वास्थ्य सेवा खर्चको १२% बनाउँछन्, र औसत परिवारको लागत $ एक बर्ष १,२०० Each र प्रत्येक वर्ष, पर्चेको औषधीको मूल्य बढ्दो छ। २०१ 2019 मा मात्र, अनुसार एउटा रिपोर्ट , औषधि उत्पादकहरूले औसत%% ले मूल्य बढाए।
लगभग वयस्कहरूको %०% अमेरिकामा गत महिनामा एक प्रिस्क्रिप्शन लिएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, त्यो मूल्यवान Rx देश भरका परिवारहरूका लागि अपरिहार्य खर्च हो - यो COVID-१ p महामारीको कारण हुने वित्तीय अनिश्चितताको समयमा किन्नु अझ चुनौतीपूर्ण हो।
यो एकलकेयरको मिशन हो कि तपाईंले उपचारको लागि अझ बढी किफायती महसुस गर्न चाहानुहुन्छ, रम्जी याकुब, फर्म.डी, सिंगलकेयरका प्रमुख फार्मेसी अफिसर भन्छन्। हाम्रो फार्मेसी बचत कार्डले मानिसहरूलाई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिनमा अरबौं बचत गर्न मद्दत गरेको छ, धेरै प्रिस्क्रिप्सनको लागत केवल केही डलरमा ल्याएको छ।
एकलकेयरमा शीर्ष 25 सस्तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स
यदि तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि कुन उपचारले शीर्ष स्थान ओगटेको छ भने, यी सस्ता Rx औषधिहरू छन्। *
Rx नाम कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१. लोराटाडाइन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
२.अमोक्सिसिलिन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
P. प्रेडनिसोन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Rep. पुन: ताजा गर्नुहोस् कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
G.भभिलिटे-सी कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Hy. हाइड्रोक्सिजाइन पामोनेट कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Hy.हाइड्रोकार्टिसोन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Flo. फ्लोरनेक्स कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Id। लिडोकेन चिपचिपा कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१०. क्लोरहेक्साइडिन ग्लुकोनेट कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
११ मेक्लिजाइन एचसीएल कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१२. डेन्टा Plus००० प्लस कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१.. भि-सी कडा कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१.. साइनोकोबालामीन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१.. Levobunolol Hcl कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१.. एस्परक्रिम लिडोकेन अधिकतम शक्ति कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
17. Klor-con / EF कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१.. एडीसी / फ्लोराइड कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
१।। फेनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
२०. सिल्वर सल्फाडिआजाइन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
२१. ल्याक्टिनेक्स कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
२२. Triamcinolone acetonide कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
२iz. निजोरल ए-डी कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
24. Hibiclens कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
25. Niacin फ्लश निःशुल्क कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
* जुन २०२० बाट एकलकेयर डाटामा आधारित। खुद्रा फार्मेसी द्वारा मूल्यहरू फरक-फरक हुन्छन्, र परिवर्तन हुन सक्दछ।
एकलकेयर कूपनको साथ उपलब्ध २ cheap सस्तो ड्रग्सले एलर्जी, महिलाको स्वास्थ्य, दन्त स्वास्थ्य, र दुखाइ सहित तीव्र र पुरानो अवस्थाहरूको विस्तृत श्रृंखलाको उपचार गर्दछ।
यदि तपाईंले खुजली आँखा, छींकने, र टाउको दुखाइको अनुभव गर्नु भएको छ, कि एलर्जेन्स ट्रिगर गर्दछ, तपाईंलाई थाहा छ लक्षणहरूबाट राहत पाउन महत्त्वपूर्ण छ। सहि एन्टिहिस्टामाइनले तपाईंलाई दुःखकष्ट रोक्न र सामान्य जीवनमा फर्कन मद्दत गर्दछ - र सिंगलकेयर बचतको साथ, यसलाई एक राम्रो पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन।
Loratadine क्लेरटिनका लागि जेनेरिक नाम हो, एलर्जी प्रतिक्रियाहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिने सामान्य एन्टिहिस्टामाइन। यो ओभर-द-काउन्टर (OTC) र प्रिस्क्रिप्शन-सामर्थ्यमा उपलब्ध छ। मानिसहरूलाई थाहा नहुन सक्ने कुरा के छ भने तपाईं ओटीसी उपचारमा बचत गर्नको लागि सिंगलकेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ — तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य प्रदायकलाई पहिले फोन कल गर्नुपर्दछ, सिम्पलकेयरमा सूत्र संचालनका उपाध्यक्ष शैले गान्धीले भने। अर्थ, यदि कम खुराकले तपाईंको लक्षणहरूलाई कम गर्दछ भने, तपाईं अझै पनि सिंगलकेयर कूपनको साथ पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्बन्धित: के म अधिक औषधिहरूको लागि प्रिस्क्रिप्शन बचत कार्ड प्रयोग गर्न सक्छु?
हाइड्रोक्सिजाइन पामोनेट ब्रान्ड नाम Vistaril को लागि सामान्य विकल्प हो। लोराटाडाइन जस्तै, हाइड्रोक्साइजीन पमोनेट एक एन्टीहिस्टामाइन हो। औषधिले बेहोर्ने प्रभावहरू पनि पुर्‍याउँछ — त्यसैले यसले चिन्ता र तनाव छोटो अवधिको उपचार गर्न सक्दछ, वा चिकित्सा प्रक्रिया अघि वा पछाडि तपाईंलाई रमाईलो महसुस गर्न मद्दत गर्न।
प्रेडनिसोन मौखिक रूपमा लिइएको एक साधारण जेनेरिक स्टेरॉइड हो र गठिया, रगत शर्तहरू, सूजन, एलर्जी, र प्रतिरोधक विकारहरू सहित बिभिन्न शर्तहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस सूचिमा रहेका धेरै जसो औषधिहरू जस्तै प्रेडनिसोनलाई प्रायः अन्य महँगो औषधीहरू, प्रक्रियाहरू वा सर्तहरूको साथ पनि सिफारिस गरिन्छ — त्यसैले यस उपचारमा पैसा बचत गर्नु अझ मूल्यवान छ।
Triamcinolone acetonide नासाकोर्टका लागि सामान्य विकल्प हो। यो नाक स्प्रे वा स्टेरोइडल क्रीमको रूपमा उपलब्ध छ। स्प्रेले तपाईको नाकमा भएको जलनलाई एलर्जीबाट मुक्त गर्दछ। सामयिक फारम प्राय: छालको सूजन र असुविधाबाट छुटकारा पाउनको लागि छाला, एक्जिमा, र एलर्जी प्रतिक्रिया सहित dermatological मुद्दाहरू सम्बन्धित छ।
जब तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईं चिन्ताको लागि अन्तिम चीज भनेको औषधीको उच्च मूल्य हो जुन तपाईंलाई राम्रो महसुस गर्नु आवश्यक छ। एकलकेयरले तपाईंलाई यो महत्त्वपूर्ण उपचारमा बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
अमोक्सिसिलिन एक धेरै सामान्य निर्धारित एंटीबायोटिक हो .8 54..8 मिलियन पटक २०१ 2015 मा मात्र, सीडीसीका अनुसार। यसको लागि एक कारण यो छ कि अमोक्सिसिलिनले यति धेरै प्रकारको ब्याक्टेरियाको अवस्थालाई व्यवहार गर्दछ, जस्तै, मूत्र पथ संक्रमण, टोन्सिलिटिस, ब्रोन्काइटिस, र कान वा घाँटी संक्रमण। यो बच्चाहरूका लागि सुरक्षित छ, र यी सामान्य बिरामीहरूको उपचारमा प्रभावकारी।
सिंगलकेयर बचतले तपाईंको बजेटमा अलि सजिलो बनाउन केटाकेटीको देखभाल गर्न मद्दत गर्दछ।ब्याक्टेरिया असंतुलन औषधीहरूको लागि यो उपचार केहि फार्मेसीहरूमा $5भन्दा कम खर्च गर्न सक्दछ।
पुनः ताजा गर्नुहोस्
पुनः ताजा गर्नुहोस् ब्राण्ड-नाम योनि देखभाल उत्पादनहरूको एक रेखा हो, योनी जेल, एक प्रो-बी प्रोबायोटिक, सफा शेष रकम, र एक राहत शीतलक स्प्रे सहित। त्यहाँ पुन: ताजाको लागि कुनै अवस्थित भुक्तान सहायता कार्यक्रमहरू छैनन्, र वर्तमानमा कुनै जेनेरिक उपलब्ध छैन। भाग्यवस, एकलकेयर प्रिस्क्रिप्शन डिस्काउंट कार्डले यस पीएच-ब्यालेन्सिंग उत्पादन लाइन सजिलै सस्तो बनाउन गर्दछ।
छ्यासी अमेरिकीहरू प्रतिशतले पूरक लिन्छन् m मल्टीभिटमिन वा एकल खनिज। ती महँगो हुन सक्छ। केहि एक बोतल को लागी $ 50 को लागी खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं प्रत्येक दिन तिनीहरू लिइरहनुभएको छ भने, यसले द्रुत रूपमा थप गर्दछ ... जब सम्म तपाईं एकलकेयर प्रयोग गर्नुहुन्न। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा फार्मासिष्टसँग कुनै पनि प्राकृतिक उत्पादहरू कुराकानी गर्न निश्चित हुनुहोस् उनीहरूलाई कुराकानीको रूपमा लिनु अघि उनीहरू कुराकानीहरू अवस्थित छन्।
V-C कडा मल्टिभिटमिन शरीरमा भिटामिन र खनिजहरू वितरण गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन आहार, बिमारी, गर्भावस्था, पाचन समस्या, वा औषधिहरूको कारण अभाव हुन सक्छ। उचित पोषण समग्र स्वास्थ्य र कल्याण कायम गर्न एक आवश्यक तत्व हो। यसका अतिरिक्त दीर्घकालीन रोगको लागि जोखिम घटाउने र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने , उचित पोषणले तपाईंको भविष्यको स्वास्थ्य सेवा लागतहरू सीमित गर्न सक्छ। धन्यबाद, यो मल्टीभिटमिन एकल सस्तो ड्रग्स मध्ये एक हो जुन सिंगलकेयर कार्डको साथ उपलब्ध छ!
मल्टिभिटमिनको थपमा, एकलकेयरले विशिष्ट भिटामिनको कमीको उपचारको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छुट प्रदान गर्दछ। साइनोकोबालामीन भिटामिन बी १२ का कृत्रिम रूप हो, भिटामिन रातो रक्त कोशिकाको शरीरको उत्पादनको लागि जिम्मेवार हुन्छ। साइनाकोबालामिन अक्सर एनीमिया बिरामीहरूलाई भिटामिन बी -१२ को कमीको कारणले सिफारिस गरिन्छ।
एकलकेयर प्रयोगकर्ताहरूले पाचन स्वास्थ्य सहायताहरूमा पनि बचत गर्न सक्दछन्। फ्लोरनेक्स एक प्रोबायोटिक हो जसले तपाईंको पाचन पथमा ब्याक्टेरियाहरूको प्राकृतिक सन्तुलन पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ। यसले ल्याक्टोवासिलस एसिडोफिलस समावेश गर्दछ जुन ढिलो आन्द्रा जस्तो पेट सम्बन्धी मद्दतको लागि सोच्दछ।
यदि फ्लोरनेक्स तपाईको लागि होईन भने तपाईका फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् ल्याक्टिनेक्स । फ्लोरेन्क्स जस्तै, ल्याक्टिनेक्सले पनि यो राम्रो ब्याक्टेरिया वितरण गर्दछ जहाँ तपाईंको शरीरलाई यो आवश्यक हुन्छ। यसमा रहेको ल्याक्टोबासिलसले विभिन्न पाचन सम्बन्धी समस्याहरूलाई कम गर्न सक्छ, जस्तै डाईरिया, योनि ब्याक्टेरिया संक्रमण, इरिटेल बोवेल सिन्ड्रोम (IBS), र ल्याक्टोज पचाउन नसक्ने जस्ता।
यस सूचीमा सबै कम्तिमा ड्रग्स जेनेरिकहरू होइनन्। Klor-Con / EF , वा क्लोर-एफर्वेसेंट, एक ब्रान्ड-नाम पूरक हो जुन पोटेशियमको कमी, वा हाइपोक्लेमियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। पोटेशियम शारीरिक स्वास्थ्य कायम राख्नको लागि एक आवश्यक रसायन हो। हाइपोक्लेमियाबाट पीडित व्यक्तिहरूले अक्सर मांसपेशीहरू क्रम्पि,, थकान, र / वा अनियमित मुटुको धडकन अनुभव गर्दछन्। जबकि हाल संयुक्त राज्यमा Klor-Con / EF को लागी कुनै जेनेरिक औषधि विकल्प उपलब्ध छैन, यो एक धेरै किफायती ब्रान्डको नाम एक सिंगलकेयर प्रिस्क्रिप्शन छुट कार्डको साथ रहन्छ।
Niacin फ्लश निःशुल्क
नियासिन एक बी भिटामिन हो जसले कोलेस्ट्रोल कम गर्न वा हृदय रोगलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। केहीको लागि, यसले असजिलो साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ, तातो चमक, खुजली, वा छालाको फ्लशिंग जस्ता। फ्ल्यास फ्रि फारमले ती हटाउन मद्दत गर्दछ, तर यसले कम कोलेस्ट्रोल कममा प्रभावकारी बनाउन सक्छ। यो पूरकले र्यानाउड रोग जस्ता सर्कुलेशन मुद्दाहरू भएका मानिसहरूलाई फाइदाजनक प्रभाव पार्न सक्छ र रक्त वाहिकाहरूलाई अलग गर्न मद्दत गर्दछ जसले प्रवाह प्रतिबन्ध गर्दछ।
दन्त स्वास्थ्य र स्वच्छता
यहाँ मुस्कानको कारण छ! एकलकेयरले टुथपेस्ट, माउथवस र पीडाबाट राहत प्रदान गर्दछ। तपाईले आफ्नो मुख खुसी र स्वस्थ राख्न आवश्यक छ।
डेन्टा Plus००० प्लस
डेन्टा Plus००० प्लस दाँत दन्त चिकित्सकहरूले प्रायः संवेदनशील दाँतका बिरामीहरूलाई जराको पुनर्जीवित गर्न, दाँतको इनेमेललाई सुदृढ पार्न र दाँतको क्षय सुधार गर्न सल्लाह दिइन्छ। जबकि धेरै स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरूले यो प्रिस्क्रिप्शन कभर गर्दैन, डेन्टा Plus००० प्लस अधिक बजेट-अनुकूल छ जब तपाईं एकलकेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ मौखिक स्वास्थ्य र स्वच्छता कायम गर्न मद्दत गर्न।
अक्सर प्रयोग गरीएको छ जब तपाईं मौखिक मुद्दाहरू छन्, chlorhexidine ग्लुकोनेट मुख र छालाको सतहबाट ब्याक्टेरियाहरू हटाउन प्रयोग गरिने एन्टिसेप्टिक तरल पदार्थ हो। यो अक्सर gingivitis को हल्का रूप को उपचार गर्न सुझाव दिइन्छ, तर दन्त प्रक्रिया वा मौखिक शल्य चिकित्सा पछि संक्रमण रोक्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस सूचिमा धेरै जसो औषधिहरू छन्, Chlorhexidine Gluconate एक जेनेरिक हो जुन धेरै ब्रान्ड-नाम मौखिक रिन्सका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
लिडोकेन चिपचिपा एक तरल दुखाई रिलीभर हो जुन मुखको घाव र घाँटी दुखाइको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो अक्सर दन्त शल्य चिकित्सा वा अन्य महंगा प्रक्रियाहरू पछि निर्धारित गरिन्छ। जबकि मुख र घाँटी समस्याहरू वास्तवमै असहज हुन सक्छ, जबकि तपाइँको नुस्खे को दर्द रिलिभर हुनु हुँदैन!
एडीसी / फ्लोराइड
फलाम, भिटामिन र फ्लोराइडको संयोजन, एडीसी / फ्लोराइड दन्त समस्याहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ; यो मुख्य रूपमा शिशु र साना बच्चाहरूलाई दुबै उपचार र दन्त स्वास्थ्य समस्याहरूलाई रोक्नको लागि सिफारिस गरिएको छ। यो सूचीले देखाईएको छ, यी सबै सक्रिय तत्वहरू स्वस्थ दिमाग, शरीर, र दाँतको लागि आवश्यक अंशहरू हुन्। तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सुरु गर्न कहिल्यै जवान हुनुहुन्न।
तपाईं फार्मेसी काउन्टरमा महँगो बिलबाट बच्नको लागि उपचार र पीडाहरूको उपचार नगरिरहनुभएको हुन सक्छ। हैन! एकलकेयरको साथ, यी दुई दु: ख राहत विकल्पहरू तपाईंको वालेटमा सजिलो छ।
एस्परक्रिम लिडोकेन अधिकतम शक्ति
यस सूचीमा केही आहार पूरकहरू जस्तै, एस्परक्रिम अधिकतम शक्ति परम्परागत रूपमा एक ओभर-द-काउन्टर औषधि हो। धेरै व्यक्तिहरू सचेत छैनन् कि यस पीडा कम गर्ने मलम जस्ता ओभर-काउन्टर उत्पादनहरू डाक्टरको प्रिस्क्रिप्शन र सिंगलकेयर कार्डको साथ छुटमा खरीद गर्न सकिन्छ। यदि तपाई आफैंलाई पीडा मुक्त गर्ने क्रीमको आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ भने, डाक्टरलाई सोध्नुहोस् कि अधिकतम सामर्थ्यको लागि एस्क्रेक्रिम लिडोकेन तपाईको लागि सही छ pres र निश्चय गर्नुहोस् कि यसले तपाईको बजेट ट्रेल गर्न सक्दैन।
Phenazopyridine , पिरिडियमको जेनेरिक, एक औषधि हो जसले मूत्र पथ संक्रमण (UTIs) सँग सम्बन्धित पीडालाई कम गर्दछ। किनकि तपाईंलाई सम्भवतः यूटीआई उपचारको लागि एन्टिबायोटिकको पनि आवश्यकता पर्दछ, यस्तो संक्रमणको लागि हेरचाहको सम्पूर्ण लागत चाँडै थप्न सक्छ। भाग्यवश एकलकेयर प्रयोगकर्ताहरूको लागि, यस औषधि संयोजनको लागत चिन्ताको लागि एक कम चीज हुन सक्छ।
चाहे यो बग काटो, स्क्र्याप, वा जला - जब तपाईंको छाला सम्झौता गरिएको छ, तपाईं त्यस असहज भावनाबाट द्रुत राहत चाहानुहुन्छ। बचतको यो राम्रोसँग, तपाईं फार्मेसीमा दौड्न सक्नुहुनेछ धेरै धेरै खर्चको चिन्ता बिना, ASAP उपचार प्राप्त गर्न।
हाइड्रोकोर्टिसोन शरीरमा स्वाभाविक रूपमा उत्पादन हुने स्टेरोइड हो। जेनेरिक हाइड्रोकोर्टिसोन ट्याब्लेट र क्रीमहरूमा पर्चेको द्वारा उपलब्ध छ। मौखिक रूपमा लिईन्छ, यसले गठिया, क्यान्सर, र प्रतिरक्षा प्रणाली विकार सहित विभिन्न सर्तहरूको उपचार गर्न सक्छ। यसको सामयिक संस्करण मुख्यतया छाला हेरचाहको लागि प्रयोग हुन्छ swe सूजन र खुजली कम गर्न। एकलकेयर कार्डको साथ, तपाईंले दोस्रो अनुमान लागत गर्नु पर्दैन।
रजत सल्फाडियाजाइन जीवाणु संक्रमणबाट गम्भीर जलेको र अन्य छालाको घाउहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक क्रीम वा जेल हो। जबकि धेरै बीमा कम्पनीहरूले रजत Sulfadiazine कभर, एकलकेयर संग यस औषधि को लागत आफ्नो बीमा कोपे भन्दा भन्दा कम हुन सक्छ। बढि भुक्तानी नगर्नुहोस् your तपाईको फार्मासिस्टलाई तपाईंको बीमा कोपे सिंगलकेयर छुटको साथ तुलना गर्न भन्नुहोस् तपाईले अधिकतम बचत प्राप्त गर्नुभयो।
Hibiclens एक एन्टिसेप्टिक समाधान हो जुन सम्पर्कमा कीटाणुहरू मार्छ। यो विशेष गरी छालामा लागू गरिएको छ, विशेष गरी कटौती र स्क्र्यापहरू सफा गर्न वा शल्यक्रिया पछि चीराहरूको देखभाल गर्न। एक महँगो चिकित्सा प्रक्रिया पछि, तपाईले चाहानु हुने अन्तिम चीज अर्को खर्च हो। एकलकेयर संग, यो जीवाणुरोधी साबुन धेरै बढी किफायती छ।
3 दिन पछि योजना बी काम गर्दछ
बाँकी कम्तीमा महँगो औषधीहरूले विभिन्न सर्तहरूको उपचार गर्दछ। चाहे तपाईं चिकित्सा प्रक्रियाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, वा जलबिन्दुको साथमा बस्दै हुनुहुन्छ, एकलकेयरले तपाईंलाई कभर गर्‍यो।
गेभिलिटे-सी कोलोनोस्कोपी वा बेरियम एनिमा भन्दा पहिले कोलोन सफा गर्न प्रयोग गरिने विगतको रेचक छ। गेभिलिटे-सीले तपाईलाई सफा गर्दा शरीरलाई हाइड्रेटेड राख्न इलेक्ट्रोलाइट्स समावेश गर्दछ। जब तपाई कोलोनोस्कोपीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई अन्तिम चिन्ताको बारेमा चिन्ता गर्न चाहानुहुन्छ तपाईको बृहत्तर क्लोन्जरको लागतलाई। एकलकेयर छुट कार्डबाट प्राप्त बचतले तपाईको मनलाई तनावपूर्ण परीक्षा भन्दा पहिले सजिलो बनाउँदछ।
यदि तपाईं गति बिमारीबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने तपाईंले यो जेनेरिक औषधि सामना गर्नुपर्‍यो। मेक्लिजाइन एचसीएल एन्टिमेमेटिक हो, एक औषधि जसले मतली र बान्ता रोक्दछ। त्यहाँ धेरै समान ब्रान्ड-नाम ट्राभल सिकनेस ड्रग्स छन्, एन्टिभेट र ड्रामामाइन सहित। एकलकेयरको साथ, यद्यपि, meclizine सम्भव भएसम्म आरामपूर्वक यात्रा गर्न सबैभन्दा लागत-प्रभावी तरिका हो!
Levobunolol HCL जलबिन्दुको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको एक सामान्य बेटा-ब्लकर हो। यो प्रिस्क्रिप्शन आँखा ड्रपको रूपमा आउँछ, र आँखामा रिसेप्टर्स अवरुद्ध गरेर काम गर्दछ कारण कारण संवहनी बाधा जलबिन्दु संग सम्बन्धित। फार्मेसीमा निर्भर गर्दै, एकलकेयर कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले v०% बचत गर्न सक्छन् लेभोबुनोल एचसीएलको नगद मूल्यमा।
निजोरल एडी केन्डोकनाजोल सहितको एक डन्ड्रफ शैम्पू हो, यसले खाजको दाँजोलाई हटाउँदछ, फ्ल्याकी स्क्याल्पले अवस्थाले ल्याउँदछ। जब तपाईं आफ्नो कपाल अवस्थाको उपचार गर्न को लागी दैनिक धुनुहुन्छ, औषधीयुक्त लेथर चाँडै जान सक्छ। एकलकेयर बचतले परिवर्तनको ठूलो हिस्सा खर्च नगरी स्वस्थ लकहरूमा फर्कन सम्भव बनाउँदछ।
प्रिस्क्रिप्शन मुल्यमा बचत कसरी सुरू गर्ने
हाम्रो वेबसाइट वा मोबाइल अनुप्रयोगमा ड्रगको नाम र तपाईको जिप कोड खोज्नुहोस्। तपाईले देख्नुहुनेछ कि कुन औषधि फार्मेसीमा तपाईको प्रिस्क्रिप्शन औषधिको लागि सबैभन्दा कम मूल्य छ। एक औषधीको खुद्रा मूल्य छुट छुट प्राप्त गर्न एक भाग लिने फार्मेसीमा तपाइँको पर्चेको औषधि छुट कार्ड लिनुहोस्। सीभीएस, वालमार्ट, क्रोजर, र वालग्रीन्स सहित हजारौं फार्मेसीहरूको साथ एकलकेयर पार्टनरहरू। यो छूटलाई तपाईंको कोपेमा बीमा वा मेडिकेयरसँग तुलना गर्नुहोस् तपाईं सधैं उत्तम मूल्य पाउनुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न। तपाइँको परिवारका सबै सदस्यहरूका औषधीहरूको लागि यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्। यो लेख पढ्नुहोस् सस्तो मेड प्राप्त गर्नका लागि अधिक तरिकाहरूका लागि।
खुला नामांकन समाप्त भए पछि स्वास्थ्य बीमा कसरी पाउने
बच्चाहरूमा गुलाबी आँखा कसरी व्यवहार गर्ने र बेवास्ता गर्ने
छाती भीड र खोकी को लागी सबै भन्दा राम्रो otc
जब वियाग्रा सामान्य रूप मा उपलब्ध हुनेछ
कसरी कालो न nail कवक बाट छुटकारा पाउन
कसरी छिटो घर मा उच्च रक्तचाप कम गर्न को लागी
ब्रोंकाइटिस को लागी काउन्टर खोकी औषधि मा